होटल "Kasadel सोल", फुकेत / थाईल्याण्ड (छात्रहरुको कासा डेल सोल): होटल, समीक्षा र फोटो को विवरण
थाई वास्तुशिल्प र परम्परागत परम्पराहरू सफलतापूर्वक होटल "क्यासिड सोल" को डिजाइनमा संयुक्त हुन्छन्। फुकेत एक प्रमोदवन हो जहाँ धेरै पर्यटकहरु आराम गर्न सपना देख्छन्। आफैलाई यो होटल चुनेको छ, तपाईं निरन्तर सान्त्वना र उच्च स्तरको सेवाको आश्वासन पाउन सक्नुहुन्छ।
"क्यासिड सोल" (फुकेत) - वर्णन
बाँकीको लागि अविस्मरणीय र उज्ज्वल हुन, यो न केवल मार्गको छनौटमा पुग्न महत्त्वपूर्ण छ, तर होटलको खोजी पनि जसमा तपाईं सबै नि: शुल्क समय खर्च गर्नुहुनेछ। यदि तपाईं रिजर्ट होटल "केसडेड सोल" मा बस्न निर्णय गर्नुहुन्छ भने तपाईं अफसोस हुनुहुन्न। नयाँ पक्षमा फुकेत तपाईंको लागि खुल्नेछ, यहाँ तपाईंले ध्यान र ध्यान महसुस गर्नुहुनेछ।
यो विशेष रूप देखि होटल को कोठा मा सस्ती आवास को ध्यान दिए को लायक छ। यस अवस्थामा, "क्यासिडेड सोल" (फुकेत) को लागी ख्याल राख्यो कि प्रवासको अवस्था सम्भव भएसम्म आरामको लागी। यस अन्तमा, कोठाहरु को एक पूरा रेंज प्रदान गर्दछ। एक सुखद क्षण एक बालकनी को उपस्थिति हो जसबाट तपाईं होटल को आंगन को प्रशंसा गर्छन, साथ नै आसपास को क्षेत्र को रंगीन दृश्यहरु लाई देख सकते हो।
तपाईं न केवल आफ्नो कोठा मा खुशी हुनेछु, तर रिसोर्ट र होटल परिसरमा "कास्सेड सोल" पनि। फुकेत यसको समुद्र तट को लागि प्रसिद्ध छ, तर यो स्थापना मा तपाईंलाई तीन अद्भुत स्विमिंग पूल मध्ये एक मा स्प्लाश को पेशकश पनि गरिनेछ। तपाईं रेस्टुरेन्टमा भोजन गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ स्वादिष्ट पारंपरिक व्यंजनहरू तयार छन्। लाउंज पट्टीमा तपाइँ आफ्नो मनपर्ने पेयको आनन्द उठाउन र आरामको संगीत बन्नुहुनेछ।
रिसोर्ट होटल को स्थान
अन्य फायदेहरूका बीचमा होटल "केसडेड सोल" (फुकेत) को विशेषता राखिएको छ, यसले यसको फायदेमंद स्थानलाई ध्यान दिन लायक छ। यो एक जीवंत रिसोर्ट क्षेत्र हो, जहाँ धेरै पसलहरू, रेस्टुरेन्टहरू, बारहरू, क्लबहरू र मनोरञ्जन केन्द्रहरूमा केन्द्रित छन्। पैदल दूरी भित्र धेरै स्थानीय सांस्कृतिक र प्राकृतिक आकर्षणहरू छन्।
अष्ट्रेलियाका थुप्रै पर्यटकहरू थाइल्याण्डको भ्रमणमा जाने उद्देश्यले, यो तपाईंको लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ कि दुई प्रसिद्ध स्थानीय समुद्र तटहरू "CASADEL Sol" ASG नजिक नजिक छन्। फुकेत यसको सुरम्य कोठरीहरुको लागि सेतो बालुवा संग प्रसिद्ध छ। खुट्टामा5मिनेट हिड्ने, तपाईं आफैलाई कोटा समुद्र तटमा भेट्टाउनुहुनेछ। पटगाउको तट लामो समयसम्म जान पर्छ।
कास्सेल सोल रिजर्ट (फुकेत) - कोठा
यात्रालाई प्रभाव पार्न केवल सकारात्मक थियो, यो तपाईंको घरमा बस्दा पूर्ण आराम महसुस गर्न अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईंको अवकाश होटल "केसडेड सोल" (फुकेत) को लागि चयन गर्दै, तपाईसँग कोठाहरूको निम्न कोटिहरू छनौट हुनेछ:
डिलक्स एक विशाल कोठा हो जुन धेरै कार्यात्मक क्षेत्रहरूमा विभाजित छ। यहाँ, दुई अतिथिहरूले डबल बेडमा सान्त्वनापूर्वक समायोजन गर्न सक्छन्। त्यहाँ एक आरामदायक सोफा पनि छ जसलाई अतिरिक्त स्थानको रूपमा कार्य गर्दछ। यहाँ त्यहाँ एक सानो भान्सा छ जहाँ तपाईं आफ्नै लागि आफ्नै खाना पकाउन सक्नुहुन्छ। साथै, तपाईं विशाल बालकलाई उल्लेख गर्न सक्नुहुन्न, आरामदायक बगैचा फर्नीचर र तौलिया ड्रायर संग सुसज्जित।
ग्रैंड डिलक्स एक प्रभावशाली क्षेत्र र साथसाथै एक सुविधाजनक लेआउट को सुविधा दिन्छ, जसको अर्थ दुई कोठाहरु को उपस्थिति छ। बेडरूम मा एक ठूलो बिस्तर छ, र बैठक को कोठा मा नरम फर्नीचर र एक भोजन तालिका छ। यसको अतिरिक्त, प्रत्येक कोठा मा एक सानो बालकनी को लागि बाहिर निकल छ।
पूल एप्स ठूलो आकार वा आधुनिक लेआउट को घमण्ड गर्न सक्दैन। यो कोटिको अपार्टमेन्ट एकदम फरक स्वाद छ। तिनीहरू सबै ग्राउण्ड फ्लोरमा छन्, जसले तिनीहरूको पूल को एक आफ्नो आफ्नै आउटलेट लैजान सक्छ।
पारिवारिक कोठा एकदम सानो छ, तर यो योजना बनाईएको छ ताकि सजिलै यो बच्चाहरु संग दुई वयस्कहरु लाई सान्त्वनापूर्वक समायोजित गर्नेछ। सुतिरहेको क्षेत्रमा एक ठूलो श्वास छ। नजिकैको बच्चाहरु को बज कुना हो। एक आर्थोपेडिक बंक बेड मा रहन शिशुहरु लाई प्रस्तावित गरिनेछ। निस्सन्देह, त्यहाँ भोजन कक्षको साथ एक भान्सा थियो, जसको बाहिरी सम्पूर्ण परिवार उपयुक्त हुन सक्छ।
डीलक्स जकूजी एक ठाठ दुई कोठा को कोठा हो, जसको विशिष्ट विशेषता एक ठूलो हाइड्रोमाउज पूल संग विशाल छत को उपस्थिति छ।
यो "Casadel Sol" (फुकेत) होटल को अपार्टमेंट को मूल डिजाइन को उल्लेख लायक छ । पर्यटकहरूले फोटोहरू थाई परम्पराहरू र आधुनिक डिजाइनको सफल संयोजन देखाउँछन्।
होटल अपार्टमेट्स को उपकरण
रिजर्ट परिसर "पीजीएस कैस्डेल सोल" (फुकेत) ले आफ्ना अतिथिहरूलाई कोठाहरूमा सुविधाहरूको निम्न सूचीको फाइदा उठाउने अवसर प्रदान गर्दछ:
ठूलो प्लाज्माको साथ आधुनिक प्लाज्मा टिभी जसले तपाईंलाई स्याटलाइट उपग्रह च्यानलहरू हेर्न अनुमति दिन्छ, जसको बीच पनि रूसी भाषण पनि छन्;
इलेक्ट्रनिक डिजिटल लक संग सुरक्षित छ, जसले तपाईंको कीमती सामान को पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेछ;
अपार्टमेन्टमा हवाइजहाजको तापमान समायोजन गर्ने क्षमताको साथ वातानुकूलन;
इलेक्ट्रिक केतली, जसको साथ तपाई सँधै एक सुगन्धित चिया तयार गर्न वा कफी घुसाउन सक्नुहुन्छ।
बाथरूम हेयर ड्रायर, साथ नै सबै आवश्यक बाथरूम सामान संग सुसज्जित छ;
एक सानो भान्सा माइक्रोवेव र भान्साको पूर्ण सेटको साथ;
आरामदायक किकर फर्नीचर संग बालकनी, साथ साथै लिनन र तौलिएको लागि सुक्खा।
स्वास्थ्य र खेलकुद
अधिक र अधिक यात्रीहरु रिसोर्ट होटल "केसडेड सोल" (फुकेत) लाई प्राथमिकता दिन्छन्, जहाँ तपाईं बस राम्रो आराम गर्न सक्नुहुन्न, तर खेलको लागि पनि जानुहोस् र तपाईंको स्वास्थ्य सुधार गर्नुहोस्। यस उद्देश्यका लागि, अतिथिहरूलाई निम्न विकल्पहरू प्रदान गरिएको छ:
तीन आउटडोर पूलहरू, जसको एउटा हाइड्रोमेशरीसँग सुसज्जित छ;
पानी स्लाइड र अन्य आकर्षण जो केवल बच्चाहरु को लागि अपील गर्न को लागी केवल वयस्कहरु लाई पनि अपील गर्नेछन्;
मालिश पेलर, जसको स्वामीले तपाईंलाई विभिन्न प्रकारका प्रविधिहरू प्रस्ताव गर्न सक्छ जुन उद्देश्य र पुनःप्राप्ति दुवै उद्देश्य हो;
भलिबल नेट, सीधा समुद्र तटमा स्थित छ;
पानी पोलो प्ले गर्न सम्भावना;
आंगन को धेरै भागहरु मा स्थित टेबल टेनिस को लागी उपकरण।
इन्फ्रास्ट्रक्चर रिसोर्ट होटल
राम्रो आराम को लागि एक महान अवसर रिसोर्ट "क्यासिड सोल" (फुकेत) द्वारा प्रदान गरिएको छ। होटल भवनहरु, अतिथि अपार्टमेट्स को अतिरिक्त मा निम्न अवरचना सुविधाहरु पनि शामिल छ:
होटलको वरिपरि बाह्य पौधहरूसँग एक कालो बगैंचा;
खुला हावामा एक विशाल छत, जहाँ तपाईं सन्याउन सक्नुहुन्छ, र वातावरणलाई प्रशंसा गर्न सक्नुहुन्छ;
बच्चाहरु को लागि एक ठूलो खेल मैदान, जहां एक स्विंग, सैंडपिट र अन्य आकर्षण हो;
पुस्तकालय, जहाँ सबैले उनीहरूको प्राथमिकताहरू अनुसार साहित्य पत्ता लगाउन सक्छन् (त्यहाँ विभिन्न भाषाहरूमा प्रकाशनहरू छन्);
एक बालबालिकाको क्लब जहाँ एनिमेटरले बच्चाहरूलाई मनोरञ्जन र रोचक अवकाश गतिविधिहरूको धेरै अवसर प्रदान गर्दछ;
पारंपरिक व्यञ्जन को रेस्टुरेन्ट, जहां एक यूरोपीय मेनू पनि छ;
पट्टीमा तपाईं लाइभ संगीत सुन्न सक्नुहुन्छ, तपाईंको मनपर्ने पेयको मजा लिइरहेका साथै साथसाथै खेल म्याच हेर्न सक्नुहुन्छ;
रिसोर्ट होटल को सम्पूर्ण क्षेत्र वायरलेस इन्टरनेट संकेत द्वारा प्रभावित हुन्छ;
रिजर्भेसन गरेर, तपाईं निजी पार्किंग क्षेत्र नि: शुल्कका लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ;
त्यसो कि ऊपरी फर्शमा बस्ने अतिथिहरू सजिलै आफ्नो अपार्टमेन्टमा पुग्न सक्थे, होटलले 24-घण्टा लिफ्ट सञ्चालन गर्दछ;
धूम्रपानको लागि धेरै क्षेत्रहरू छन् (यस क्षेत्रको बाहिरी भागमा यो कार्य सख्त रूपमा निषेध गरिएको छ)।
बच्चाहरु संग छुट्टियाँ
धेरै पर्यटकहरूले परिवारबाट यात्रा गर्न र छुट्टीमा बच्चाहरूलाई पनि प्राथमिकता दिन चाहन्छन्। यो बुझाइरहेका, उपयुक्त पूर्वाधार विकसित गरिएको थियो रिसोर्ट कम्पास "क्यासडेड सोल" (फुकेत)। यो भन्दा सानो दृश्यको लागि सेवाहरू:
किनकी बच्चाहरु खाना मा धेरै सजिलो छन्, त्यसपछि रेस्टुरेन्ट मा तपाईं को लागि एक विशेष आहार र hypoallergenic मेनू को समन्वय गर्ने अवसर पाउनेछ;
एक विशाल खेल मैदान जुन उष्णकटिबंधीय बगैचाको घने हरियालीमा घोर लुगाबाट लुकेको छ;
पूल मा बच्चाहरु को लागि एक अलग सुरक्षित क्षेत्र छ, जो पानी को स्लाइड र अन्य मनोरंजन संग सुसज्जित छ;
बच्चाहरु को चलचित्र, जहां हरेक शाम मुफ्त शो कार्टून को लागि, साथ नै बच्चाहरु लाई एक नयाँ पॉपकर्न को उपचार गर्छन;
डाइरेक्टरीको हरेक साँझ पछि, डिस्को भ्रमण गर्न जवान पर्यटकहरूलाई निम्तो दिइन्छ;
एक विशेष बच्चाहरु को क्लब को आयोजन गरिएको छ जसमा पेशेवर शिक्षकों को बच्चाहरु को अवकाश को समय को लागी जिम्मेदार छ;
एक विशेष आरामदायक बच्चाहरु को फर्नीचर को सबै भन्दा कम अतिथिहरु को लागि रेस्टुरेन्ट मा प्रदान गरिन्छ;
पहिलेको व्यवस्था गरेर, तपाईंको कोठामा एक बच्चाको कोष्ठ स्थापना गरिनेछ (बच्चा कुर्सियां, बर्तनहरू, स्नानहरू, स्ट्रोलरहरू, आदि) पनि प्रदान गर्न सकिन्छ;
तपाईंको अनुपस्थितिको समयमा, बच्चा बच्चा संग रहन सक्छ।
सेवाहरूको अतिरिक्त सूची
"Casadel Sol" (फुकेत) मा बाँकी - यो एक खुशी छ, किनभने यहाँ अतिथिहरू सेवाहरूको विशाल सूची प्रदान गरिएको छ। तपाईंलाई होटेलमा आरामदायक आरामको लागि निम्न अतिरिक्त विकल्पहरू प्रस्तावित गरिनेछ:
तपाईं भोजनालय मेनु बाट सीधा कुनै पनि डिश आदेश गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो कोठामा, यदि तपाईं एक शोर र भीड सेटिङमा खाने चाहनुहुन्न;
होटल को लबी मा सामने डेस्क 24 दिन खुला छ, जो तपाईंलाई दिन को कुनै पनि समयमा जानकारी प्राप्त गर्ने मौका दिन्छ;
त्यसो कि ठूला सूटकेस तपाईं कोठामा हुँदाहुँदै तपाईंसँग हस्तक्षेप गर्नुहुन्न, तपाईं तिनीहरूलाई विशेष रूपमा डिजाइन गरिएको भण्डारण कोठामा भाडा लिन सक्नुहुन्छ;
होटल को लबी मा एक ठूलो लाउंज-क्षेत्र एक ठूलो प्लाज्मा टीवी संग सुसज्जित छ, साथ नै आरामदायक नरम सोफे;
यदि आवश्यक छ भने, प्रशासकले तपाईको कागजातहरूको प्रतिलिपि बनाउन मद्दत गर्दछ, र फ्याक्स मार्फत कुनै पनि ठेगानालाई पनि पठाउँदछ;
तुरुन्तै तपाईंको कोठामा पुग्दा समुद्र तटका यात्राहरूको लागि ताजा तौलिए हुनेछ;
स्वागत मा, साथै रूसी मा काम गर्ने रेस्टुरेन्ट कर्मचारीहरु मा।
पर्यटकहरूको लागि उपयोगी जानकारी
छुट्टीमा होटल "PGS Casadel Sol" (फुकेत) मा जानुहोस्, निम्न कुरामा ध्यान राख्नुहोस्:
निपटान घडी होटल व्यवस्थित र निष्कर्ष संग होटल देखि दोपहर मा र 14:00 क्रमशः निर्धारित गरिएको छ;
अतिथिहरू उनीहरूलाई कुनै जनावरहरू होटलमा ल्याउन कडा रूपमा निषेधित छन्;
6 बर्ष भन्दा कम उमेरको बच्चाको लागि अतिरिक्त बेड 500 थियौं कुरा हरेक दिनको लागि र वयस्कहरूको लागि यो शुल्क 1000 बहर हुनेछ।
प्रत्येक अपार्टमेटले एक भन्दा बढि अतिरिक्त बिदालाई समायोजन गर्न सक्दैन;
तपाईं एक गैर प्लास्टिकको कार्ड मार्फत नगद फारममा प्रदान गरिएका सेवाहरूको लागि भुक्तानी गर्ने मौका पाउनेछ;
न्यूविड्स, जन्मदिन मान्छे, साथसाथै नियमित अतिथिहरूलाई सुखद बोनस, प्रशंसा, साथै छूट र विशेषाधिकार दिइएको छ।
थाइल्याण्डमा आवासको लागि एक सजिलो विकल्प "कैस्डाड सोल" (फुकेत) मा विचार गर्न सकिन्छ। यस रिसोर्टको बारे समीक्षाहरू प्राय: सकारात्मक टिप्पणीहरूको पूर्ण र धन्यवाद छन्:
बच्चाहरु को लागि एक उत्कृष्ट कार्यक्रम साँझ सिनेमा को भ्रमण गर्न को लागी छ, किनकि उनि रूसी मा शामिल एक हंसमुख कम्पनी मा आफ्नो पसंदीदा कार्टून हेर्न सक्छन्;
कोठाहरु को क्षेत्र एकदम विशाल छ, जो तपाईंलाई सजिलै संग फर्नीचर मा ठोकर को बिना स्थानांतरित गर्न को लागी अनुमति दिन्छ;
होटल को स्थान सुविधाजनक छ - यो शहर को एक बहुत ही केंद्र में स्थित है (जो शहर के बुनियादी ढांचे के लिए त्वरित पहुँच प्रदान करता है), लेकिन एक ही समय अस्थायी स्ट्रीट हलचल से एक छोटी सी गली में छिपा हुआ है;
केवल तीन स्विमिंग पूलहरुको साथ, साथ छ साथ सूर्य लाउंज को एक ठूलो संख्या छ, त उपलब्ध छ कि उपलब्ध सीटहरु को कमी संग कठोरता र असहज परिस्थिति को कुनै मतलब छैन;
होटलको नजिकै त्यहाँ धेरै पसलहरू छन् जहाँ तपाईं स्वेच्छाहरू किन्न सक्नुहुन्छ। साथै त्यहाँ धेरै क्याफेहरू छन्, कराओके र अन्य मनोरञ्जन प्रतिष्ठानहरूसँग बारहरू;
धेरै राम्रो प्रभाव कोठा द्वारा निर्मित छ जुन पूल को लागि आफ्नो पहुँच छ (बाटो, पानी मा धेरै साफ छ);
रिसेप्शनमा काम गरिरहेका रूसी-बोल्ने कर्मचारीहरूले सजिलै ब्यवसायको उपचार गर्न, जीवनसँग सम्बन्धित कुनै पनि समस्या समाधान गर्न मद्दत पुर्याउन;
यदि होटलमा पर्याप्त नि: शुल्क स्थानहरू छन् भने, तपाईं आबादी गरिनेछ, अनुमानित घण्टाको प्रतीक्षा नगर्ने;
होटल को विशिष्ट डिजाइन, थ थाई परंपराहरु मा निरंतर। होटल क्षेत्र धेरै रोचक सजावट छ, जसले तपाईंलाई धेरै मौलिक तस्बिरहरू बनाउन अनुमति दिन्छ;
जहाँ त्यहाँका कदमहरू छन्, रैंपहरू छन्, स्याम्पसहरू उठाउँदा साथै साथै साना बच्चाहरूसँग आएका पर्यटकहरूका लागि धेरै सजिलो हुन्छ;
बैङ्कनिक्स धेरै सहज र विशाल हुन्छन्, साथसाथै आश्चर्यजनक दृश्यहरू उनीहरूबाट खोलिन्छन्;
थाईल्याण्डको लगभग सबै होटेलहरूमा बच्चाहरु को अवकाश को संगठन संग एक समस्या छ, तर यस संस्था मा बच्चाहरुको लागि एक धेरै अमीर कार्यक्रम र धेरै मनोरंजन प्रदान गरिएको छ। एक ठूलो प्लस - मजाकिया एनिमेटरहरू र शिक्षकहरू, जुन तपाईले व्यक्तिगत मामिलामा व्यस्त हुनुहुँदा केहि घण्टा सम्म बच्चालाई भरोसा गर्न सक्दछ।
सकारात्मक टिप्पणिहरु को सामान्य जन को बावजूद, होटल "केसडेड सोल" (फुकेत) मा केहि दोषहरू छन्। पर्यटकहरूबाट प्रतिक्रिया निम्न नकारात्मक बिन्दुहरूलाई संकेत गर्दछ:
क्षेत्र ग्रीन पर्याप्त छैन, जुन तातो उष्णकटिबंधीय वातावरणमा धेरै महत्त्वपूर्ण छ;
ब्रेकफेस्टहरू एकदम कम हुन्छन् - प्लेटमा रोटी र थोपा जाम छ। त्यसकारण, यो राम्रो होटलमा भोजनको लागि अति भुक्तानी छैन, तर छिमेकी प्रतिष्ठानहरूमा खानुहोस् वा स्थानीय बजारमा ताजा उत्पादनहरू खरीद गर्नुहोस्, कोठामा पूर्ण सुसज्जित रसोईघरको लाभले तपाईंलाई आफैं तयार गर्न मद्दत गर्दछ। यस मामिलामा ठूलो मद्दत बहुमुखी हुनेछ।
कोठाहरूको संख्या कस्मेटिक नविकरणको आवश्यकता छ;
तथ्यको बावजूद कि च्यानलहरूको एक ठूलो संख्या भनिन्छ, केवल केहि स्थानीयहरू देखाईएको छ (यसबाहेक, धेरै खराब छवि गुणस्तर);
इलाकामा थुप्रै मच्छरहरू छन् किनभने पोखराबाट आएको आम्दानीको कारण;
सफाईको गुणस्तर पनि बढ्दै गएको छ - जब बसेको हुन्छ, केहि पर्यटकहरूले कोठामा धूल तहको बारेमा गल्ती गर्छन् भनेर टिप्पणी गर्दै कि कसैलाई पनि बाँकी रहन्छ। (केवल एउटै चीज छ कि आवश्यक मान्नु आवश्यक छ तौलिया परिवर्तन गर्न को लागी);
संख्यामा सूटकेसहरू राख्न मद्दतको बावजूद, कसैले तपाईंलाई यस्तो सेवा दिनेछैन;
यस तथ्यको बावजुद वायरलेस इन्टरनेट सिग्नलको होटलमा सम्पूर्ण क्षेत्र समाविष्ट हुन्छ, कम गति र खराब जडानको गुणस्तरको कारण नेटवर्कमा पुग्न लगभग असम्भव छ;
होटलमा पर्सनल कर्मचारीहरू छैनन् (जसरी सामान्यतया यो उच्च तहको होटेलमा रहेको मामला हो);
यो "क्यास्सेड सोल" होटल (फुकेत) "पेगासस" को भ्रमण डेस्क को सेवाहरू प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छैन, जसले सेवाहरूको मूल्यहरु बढाउँछ (यो स्थानीय गाइडबाट भ्रमणहरू खरीद गर्न सजिलो छ);
यदि तपाइँ भ्रमणमा निर्दिष्ट अवधि भन्दा लामो होटलमा रहन चाहानुहुन्छ भने, तपाईं सजिलै आकाशको उच्च मूल्यको लागि आवासको आवाज सुन्न सक्नुहुन्छ, र यसैले अझ राम्रो पुस्तक अपार्टमेट्स इन्टरनेटमा विशेष स्रोतहरु मार्फत।
यद्यपि, सूचीबद्ध हानि विवादित छन्। धेरै पर्यटकहरु को समीक्षा नकारात्मक राय को अस्वीकार गर्दछ र यस होटल मा उपलब्ध उच्च स्तर को सेवा को संकेत दि्छ।
थाईल्याण्ड - ती पर्यटकहरु असामान्य र विदेशी छुट्टी मन गर्ने को लागि एक प्राथमिकता। यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण कुरा प्रदान गर्न सक्ने होटल "Kasadel सोल" एक शानदार आवास पनि छ। यसको मुख्य विशेषता आर्किटेक्चर जो यो पनि सम्भव थाई संस्कृति थाह प्राप्त बनाउँछ परम्परागत थाई शैली, बनेको छ भन्ने छ।
यो कि यस होटल आवासीय ठाउँ skimp छैन टिप्पण लायक छ, र सबै अपार्टमेन्ट एकदम एक प्रभावशाली क्षेत्र घमण्ड किनभने। साथै, सबै कोठा balconies र केही पनि दुई वा तीन, जो सुन्दर मनोरम दृश्य प्रदान गर्दछ छ। यो पनि एकदम सुखद क्षण धेरै पूल को उपस्थिति रूपमा मानिन्छ गर्न सकिँदैन, त्यसैले त्यहाँ जकडन को कुनै भावना छ। सफा गर्ने पूल मा पानी।
आफ्नो रहन सहज र रमाइलो बनाउन प्रयास, वयस्क र युवा - होटल यसको अतिथि पर्खिरहेको।
Macronissos गाउँ3* Ayia नापा - फोटो, मूल्यहरु र समीक्षा
होटल एक्वा Azur4* (बुल्गेरिया): फोटो र समीक्षा
होटल "वोल्गा" (कजान): ठेगाना, विवरण, समीक्षा
मेरिना Melia - ज्ञात मनोवैज्ञानिक।
अस्पताल "समुद्रको पर्ल" (Kabardinka): वर्णन, आराम र समीक्षा
होटल "Amara Dolce Vita" (टर्की): ग्राहकहरु माग लागि सुरुचिपूर्ण छुट्टी
विशेष मिति - अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस
सोभियत संघ शिक्षा: छोटकरीमा सबै
ग्रीस मा सबै भन्दा ठूलो विमानस्थलको: विवरण
के अनुशासन "संगीत को प्राथमिक सिद्धान्त" अध्ययन छ?
श्रीमान्सँगै मेलमिलाप लागि प्रार्थना। कहिले र कसरी एक प्रार्थना पढ्न
चोटपटक उन्मुक्ति कसरी
हितोपदेश र civility को वचनहरू
गर्भवती गर्भनिरोधक को विधिहरू प्राप्त गर्न कसरी छैन,
प्रसिद्ध मलाला युसफजई?
लिपस्टिक भौं: विवरण, निर्माता, आवेदन र समीक्षा
संगठन के हो र कुन प्रकारको व्यक्तिलाई व्यवस्थित भनिन्छ